Prominent Myanmar activist cancels trip to US | Freedom News Group
by FNG on September 15, 2012	၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများအဖွဲ့မှ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များဖြစ်သော ကိုမင်းကိုနိုင်၊
ကိုဌေးကြွယ်၊ ကိုပြုံးချိုနှင့် အဖွဲ့ဝင်အချို့မှာ စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင် ဖားကန့်မြို့သို့ သွားရောက်၍
ထိုဒေသတွင်းဖြစ်ပွားနေသော တိုက်ပွဲများကြောင့် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ ရင်ဆိုင်နေရသော
လူနေမှုဘ၀အခြေအနေများကို သွားရောက်လေ့လာကာ၊ သွားရောက်အားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များမှာ ဖားကန့်ဒေသတွင် နှစ်ရက်နေထိုင်မည်ဖြစ်ပြီး
စက်တင်ဘာ ၁၈ တွင် မိုးကောင်းမြို့သို့ ဆက်လက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင်မှ
ရန်ကုန်သို့ ပြန်လာမည်ဖြစ်သည်။ တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေသော ဖားကန့်ဒေသသို့ သွားရောက်ရန်
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များက ယခင်ကတည်းက စီစဉ်ခဲ့ပြီး ယခုမှ သွားရောက်
မည်ဖြစ်ကာ ထိုသို့ သွားရောက်ရန် သက်ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းများထံသို့လည်း
ယခုအခါ ၄င်းတို့မှာ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့တွင်
ကျင်းပနေသော မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းခြင်း တစ်နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် သဘာဝပတ်ဝန်း
ကျင်ဆိုင်ရာ ဟောပြောပွဲ (တရားဝင်အသုံးနှုန်း- သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ
အသိပညာပေး ဟောပြောပွဲကြီး) သို့ တက်ရောက်လျက်ရှိသည်။
7Day News Journal ဂျာနယ် မှ ကူးယူ ဖော်ပြသည်။
By Aye Aye Win on September 15, 2012 | AP News
The ceremony is taking place Thursday in Washington, withakeynote speech to be given by Aung San Suu Kyi, Myanmar’s most famous democracy crusader. The opposition leader leaves Sunday for her first U.S. trip since she was put under house arrest in 1990.
“I really value the award given by the National Endowment for Democracy, but I have decided not to travel to Washington to accept it,” Min Ko Naing told the AP.
Over the last year, President Thein Sein’s government has spearheaded unprecedented change in Myanmar, relaxing decades of harsh rule and allowing freedoms previously unheard of in the Southeast Asian nation. But major challenges remain. Rights groups say that human rights abuses continue, that rule of law is weak and that corruption remains strong.
From: သတင်း, ပြည်တွင်းသတင်း	← ဘ၀ ဇာတ်ကြောင်း ကို ဦးကျော်ဆန်း စာ အုပ် ထုတ် ဝေမည်
မြန်မာပြည်မှာ လိုအပ်နေတဲ့အရာ (ဖရန့်စစ်ဖူကူယားမား) →
Follow @freedomnews_usFNG ၏ သတင်း နှင့် ဖော်ပြ ထား မှု များ ကို ပြန်လည် ဖတ်ရှုရန် Select Month December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 FNG LATE NIGHT SHOW Myanmar News in EnglishMyanmar beat Timor Leste to record second straight winmyanmar-travel-AFPrelax-101213.jpgLuxury river cruise to sail Myanmar waters next yearMyanmar may score better than Malaysia on human rights, says Suhakam chiefUndergrads return to crumbling Myanmar universityPH flounders in wushu; Myanmar leadsMyanmar gives relief to CebuMyanmar's president asks Philippines for more aidWant Burma info in your inbox each morning?